Unokwenza "i-Phishing" nge-AirTag kwaye iApple iyayazi | Ndisuka mac
Unokwenza "i-Phishing" nge-AirTag kwaye i-Apple iyayazi
Oko amarhe aqala kwiminyaka embalwa eyadlulayo ukuba uApple wayeceba ukumilisela umkhweliUninzi lwethu lucinga ukuba luyinto yokudlala enokusetyenziselwa iinjongo ezithile "ezimnyama", njengokufumana umntu ngaphandle kwemvume yakhe.
Okwangoku, iApple iyisombulule, ngezilumkiso zokuba imiba ye-iOS 15 kwi-iPhone yexhoba xa kunokwenzeka. Andizukumangaliswa ziinwele ezinokuthi emva kwexesha zibe "yi-jailbroken" ukuya kwi I-AirTag, kwaye uguqule isoftware yakho yangaphakathi ukunqanda ezi zaziso. Ukuba oko kwenzeka ngenye imini, siya kuba nengxaki. Ngeli xesha, sele beziyile ukuba babe nakho ukwenza «ubuChwepheshe» kunye nendawo ekuyo.
Umphandi wezokhuseleko ubonakalisile ukuba ungaziguqula ii-AirTag ngokufaka ikhowudi yenkqubo kwicandelo lenombolo yefowuni ngaphambi kokuyifaka kwiMowudi elahlekileyo, ukuze uqondiswe kwiwebhusayithi ye «UkuPhatha»Ukuba ufumanisa ukuba yathi i-AirTag« ngolunya ». U-Apple uyiqinisekisile.
Oko kuthetha ukuba xa umntu efumanisa ukuba "icwangciswe kakubi" i-AirTag kwaye uyijonga, baya kuthunyelwa kwenye iwebhusayithi ekhethwe ngumhlaseli.
Into exhalabisayo malunga neli tyala kukuba ukufumanisa komngxunya wokhuseleko, UBobby rauch Ifumanise ukuba semngciphekweni ngoJuni, yazisa u-Apple, kwaye wayicebisa ukuba inike iintsuku ezingama-90 ngaphambi kokubhengeza esidlangalaleni isiphoso. Eli xesha leentsuku ezingama-90 yinto eqhelekileyo kwicandelo lokhuseleko, njengoko inika inkampani ixesha elaneleyo lokuyilungisa ngokuhlaziya isoftware yesixhobo.
Kubonakala ngathi U-Apple akayilungisanga, Kwaye emva kweentsuku ezingama-90, uye wapapasha oko akufumanisileyo. Abo baseCupertino bafuna isisombululo, kodwa okwangoku, oku kusemngciphekweni kuhlala kusebenza. Ukuba ufumana i-AirTag elahlekileyo, gcinani engqondweni ukuba akukho mfuneko yokuba ungene kunye ne-ID yakho ye-Apple ukuze uxele ilahleko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Unokwenza "i-Phishing" nge-AirTag kwaye i-Apple iyayazi
Uhlaziyo lwenkxaso yezixhobo zeMacOS Big Sur lukhutshiwe
URussell Crowe kunye noZac Efron sele benamaqabane kwifilimu entsha ye-Apple TV +